Photo Source : Ratopati.com
प्रत्येक कर तिर्न निश्चित अवधि तोकिएको हुन्छ। सामान्यतया उक्त अवधि सकिएको मितिले पच्चिस दिन भित्र कर बुझाइसक्नुपर्छ। तर कारणवश पच्चिस दिन भित्र कर कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेमा के हुन्छ? ती के के परिस्थितीहरू हुन सक्छन्? त्यस्तो परेमा के गर्ने? यो लेखमा हामी यीनै विषयहरूमा छलफल गर्छौँ।
कस्तो परिस्थितीमा कति समयभित्र कर बुझाए हुन्छ?
कर बुझाउनु पर्ने व्यक्ति बिरामी परेर अशक्त भएमा निको भएको मितिले सात दिनसम्म,
कर बुझाउनु पर्ने व्यक्तिले क्रिया बस्नु परेमा क्रिया सकिएको मितिले सात दिनसम्म,
कर बुझाउनु पर्ने महिला सुत्केरी भएमा सुत्केरी भएको मितिले पैँतिस दिनसम्म,
कर बुझाउनु पर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएमा वा बेपत्ता भएमा त्यस्तो भएको मितिले पैँतिस दिनभित्र निजको हकवाला वा संरक्षकले निवेदन गरेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनसम्म,
बाढी, पहिरो, हिउँ वा अन्य त्यस्तै कारणबाट बाटो बन्द भएर मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयमा आउन नसकेको अवस्थामा बाटो खुलेको मितिले सात दिनसम्म,
यातायातको साधन पूर्ण रूपमा बन्द भएर आउन नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो बन्द समाप्त भएको भोलिपल्ट सम्म
माथि मध्ये कुनै पनि परिस्थिति आएमा के गर्ने?
के कारण उपस्थित हुन नसकेको हो उक्त कारण खुलाएर कर कार्यालयमा निवेदन बुझाउनुपर्छ। त्यसको प्रमाणहरू जस्तै डाक्टरले दिएको पुर्जा पनि बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ। जाँचबुझ गर्दा तपाईले दिनुभएको कारण सहि देखिएमा महानिर्देशकले कर तिर्न ढिलो गरे बापत लाग्ने दस्तुर छुट गरिदिन सक्छ।
सामान किन्दा यसरी पैसा तिरेमा १०% भ्याट फिर्ता...
आन्तरिक राजस्व विभागले इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट मार्फत गरिने...
भ्याट दर्ता खारेज कसरी गर्ने? (आवश्यक कागजात र...
सरकारले तोकेको थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी कारोबार गर्ने...
यदि तपाईको व्यवसाय भ्याटमा रजिस्टर छ भने...